Caruurta naafada ah - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Dadka naafada ah > Caruurta naafada ah
Kaalmada naafada ee dadka 16 sano jirka ka yar
Cunugga 16 sano ka yar wuxuu heli karaa kaalmada naafada, haddii uu naafadiisa ama jiradiisa darteed u baahanyahay daryeel, xannaano iyo baxnaanin joogto ah ugu yaraan muddo lix bilood. Kaalmada dadka 16 sano ka yar waxaa laga codsan karaa Kelada. Kaalmada waxaa inta badan la bixiyaa muddo cayiman. Marka uu dhamaado, sii wadista kaalmada waa la codsan karaa.
Taakulaynta dhaqaale ee daryeelka khaaska ah
Kelada waxaad ka heli kartaa lacagta daryeelka gaarka ah, haddii
cunuggaada 16 sano ka yar uu isbitaal ku jiro ama
aad cunuggaada guriga ku daryeesho, guri ku daryeelistuna ay la xiriirta isbitaal ku daryeelista cunuggaada ama
kaalmadaada suuqa shaqadu ay si ku meelgaar ah u go’ayso, maadaama aadan ka qeybqaadan karin waxbqabadyada laqabsashada xannaaneynta cunuggaada darteed ama
cunuggaadu uu tijaabinayo ku laabashada xannaano-maalmeedka ama dugsiga
Dib u soo celinta ilmaha
Ilmaha leh laxaad la’ida adag waxa uu heli karaa daaweynta dib u soo celinta ee adag (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Kelada ayaa qabanqaabinaysa dib uu see celinta bixinaysana kharashkeeda. Dib u soo celinta waxa ku jira waxqabadyo badan oo kala duwan. Waxay noqon kartaa fisioterabi ama koorsooyin badan oo kala duwan oo lagu baranayo qaabka loola noolaan karo laxaad la’ida. Sidoo kale Keladu dib u soo celinta waxay u qabanqaabin kartaa qaab ah dib u soo celin fiiro gaar ah (harkinnanvarainen kuntoutus). Ujeedada baxnaaninta ka fiirsashada ku saleysan waa wanaajinta awoodda shaqo ama waxqbad. Haddii ilmuhu uu heli waayo daaweynta dib u soo celinta ee adag waxa ay mas’uuliyadu ka saarantahay dib u soo celintiisa degmada.
Waxbarasha iskuulka ee ilmaha laxaadka la’
Ilmaha laxaadka la’ waxa uu xaq u leeyahay in uu tago iskuul ama iskuulka xaafadiisa. Ilmaha laxaadka la’ waxa uu heli karaa waxbarid xaaladiisa u khaas ah haadii laxaad la’idiisu ay ku adkaynayso fahamka waxbarashada. Sidoo kale ilmuhu waxa uu heli karaa caawiye iskuul (koulunkäyntiavustaja), haddii loo baahanyahay.
Keladu waxay bixin kartaa kharashka qalabka caawinta ah (apuvälineet) ee qaaliga ah ilmaha laxaadka la’na uu ugu baahanyahay waxbarashadiisa. Kuwaas waxa noqonaya kombiyuutarada iyo qalabka dheeraadka ah. Qalabka caawinta waxa la heli karaa, haddii uunan ilmuhu waxbaran karin la’aantood ama waxbarashadu ay aad ugu adagtahay. Qalabka caawinta waxa la heli karaa ugu horrayn marka uu ilmuhu ku jiro dugsiga dhexe fasalkiisa todobaad ugu horrayn.
U isticmaalka qalabka caawinta naafa xagga shaqada iyo waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Wakhtiga firaaqqada ah ee ilmaha laxaadka la’
Waxad heli kartaa macluumaad ku saabsan fursadaha kala duwan ee waxqabadka waxkhtiga firaaqada ah ee dagmadaada qaybaheeda thaqaafada iyo jimicsiga. Sidoo kale ururada laxaad la’aanta ayaa diyaaraya waxqabadyo kala duwan oo wakhtiga firaaqada ah. Tusaale ahaan Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry waxay qabanqaabiyaan waxqabadyo kala duwan oo jimisiga iyo sbortiska ku saabsan.
Jimicsi ku socda dhalinyarada iyo caruurta laxaadka la'Finnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 10.06.2021 Boggan war-celin ka soo dir